मध्यरातमा अमेरिका उडे अनमोल, भन्छन्– फिल्म छोडेँ मैले अब प्रदीप र पलले गरे हुन्छ ! – Medianp
मध्यरातमा अमेरिका उडे अनमोल, भन्छन्– फिल्म छोडेँ मैले अब प्रदीप र पलले गरे हुन्छ !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, पुष २५, २०७५१२:०४0
काठमाडौँ । नेपाली युवा स्टार अनमोल केसी हिजो बेलुका (मंगलबार ) अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । उनी आउदो चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’को एक गीतको सुटिङका लागी अमेरिका जान लागेको उनले बताए । भने यस चलचित्रबाट निमार्ता झरना थापाले आफ्नी छोरी सुहानलाई डेब्यू गराउदै छिन् । चलचित्र चैत २९ गतेबाट देशभर प्रर्दशनमा आउदै छ ।
त्यस्तै अनमोलले भर्खरै नयाँ चलचित्र ‘ब्याचलर बन्टी’ छोडेका छन् । जसको अहिले धेरै चर्चा र आलोचना दुवै भइरहेको छ । त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका अनमोलले एक अन्तवार्ताको क्रममा सोधिएको के तपाईले फिल्म छोडेको हो ? भन्ने प्रश्नमा ,,अनामोलले यस्तो जवाफ दिए हो मैले नै चलचित्र गर्दिन भनेको हो ।
त्यस्तै अर्का प्रश्नमा तपाईको ठाउमा कुन कलाकारलाई राख्दा उचित हुन्छ ? यस्तो जवाफ दिए ,अहिले बजारमा चलेका प्रदीप, पल, सलिनमान जसले गर्दा नि हुन्छ भने । र अर्को रहस्यमय कुरा उनले सोही अन्तर्वातामा नायिका सारा सिर्पालीसँगको प्रेम चर्चा मात्र भएको बताए । बाकी भिडियोमा हेर्नुस्
स्काईपी चलाउनेहरु असुरक्षित, भिडियो कल रिसिभ गर्दा गोप्य डाटा खतरामा ! (भिडियोसहित)
सधै हट ग्ल्यामर लुक्समा देखिने अभिनेत्रीहरु हेर्नुहोस् यस्तो देखिन्छन् बुर्कामा